Alerts | mmCert
It isagood practice to apply updates and patches on your computer to fix known security vulnerabilities inatimely and responsive way.
2021-01-06 Facebook Team အယောင်ဆောင်ထားသော Page များနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးသတိပေးချက်
2020-04-15 COVID-19 ၏ Indicators of Compromise (IoC) များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်
2020-02-01 Coronavirus Phishing Scam များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် Coronavirus ကူးစက်မှုများပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ . ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Mimecast က ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် “Singapore Specialist: Corona Virus Safety Measure” အမည်ဖြင့် အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင် အဖျက်အမှောင့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါသော Link များနှင့် PDF ဖိုင်များပါရှိပြီး Wuhan coronavirus ကူးစက်ခြင်းမှ မိမိကိုယ်ကို မည်သို့ကာကွယ်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ဖြင့် Wuhan coronavirus နှင့်ပတ်သက်၍ လူတို့၏ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကို အသုံးချ၍ မသမာသူများမှ အီးမေးလ်ကမ်ပိန်းများပြုလုပ်ကာ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူများ၏ အကောင့်များကို ခိုးယူရန်ကြိုးစားခြင်း၊ Spyware များ ဖြန့်ဖြူးရန် ကြိုးစားခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါသည်။
2019-07-30 STOP Ransomware (.format) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.format) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: rDy9PQ5XqCEzGPAYiMtrOElRFd84gmoSzf1zJ8t1 Password: MhHKIg5yGL8dnIkTduHUmsyXDFrEH9wV1FlZt6t2
2019-07-28 STOP Ransomware (.access) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၂၈)ရက်နေ့ (ယနေ့ ညနေ ၅နာရီ) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.access) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: ReORV6ShrtWNuJ0ceWs0HqhvCbzW3XJQmmwGQpt1 Password: RTi2uIALU6KQDU92yc7bXiRPZtIn11bBpVc8vrt2
2019-07-27 STOP Ransomware (.ndarod) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၂၇)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.ndarod) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: 9sbdJHqXJM4N6uliOFljF4lS1kQ5MipUBQqeGet1 Password: SbuT39RzheKNOF0iueAOhYLOFUB9kapDwqr6Ntt2
2019-07-26 STOP Ransomware (.ntuseg) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.ntuseg) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: qzVmsmPsBbMag5eclxPzsGPYPtD0idScDzpGvxt1 Password: amQELLhV5K3pFyZmtUn4xI0NUfDcPQNgq4BC6yt2
2019-07-25 STOP Ransomware (.bopador) နှင့် (.novasof) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.bopador) နှင့် (.novasof) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်
2019-07-23 STOP Ransomware (.dodoc) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၂၃)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.dodoc) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: tC9q9U9z1CHXj6ywfSklY5Ati8qfrhwcOEQpvQt1 Password: QFn6Gxwfzg6bHlO5DTGKtMh8Y2EfS33u4fbrVrt2
2019-07-23 STOP Ransomware (.lapoi) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၂၃)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.lapoi) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: ZivCxija0GBwtwtwD0q4JRy80spT6lUyybPYhot1 Password: nA3GY05Mr9SskX1H4M5CNkSN9p9jIqm8JO9ugyt2